Uphi i-eMule egcina iikhredithi? (Inxalenye yesi-2) | Iindaba zeGajethi
HMolweni nonke, ndiza kugqiba ukunixelela apho iMule igcina khona iikhredithi ezonwabileyo. Ukuba awukalifundi icandelo lokuqala lale post, ndikucebisa ukuba ufunde kuqala Uphi i-eMule egcina iikhredithi? ke uyazi ukuba ndithetha ngantoni kwaye kutheni kubalulekile ukwazi indawo yekhredithi yakho.
DNgayiphi na imeko, masikhumbule izinto ezintathu ezithile:
I-eMule isebenzisa inkqubo yekhredithi esebenza ukuzinyusa kuluhlu lokulinda lwekhompyuter apho uzama ukukhuphela khona into.
Ezi iikhredithi azikho kwihlabathi liphela, oko kukuthi, ziya kukunceda kuphela ukunyusa uluhlu lokulinda lwekhompyuter esele ikhuphele into kwikhompyuter yakho. Ukuba uqhagamshela kwikhompyuter engazange ikhuphele nantoni na eyakho, le khompyuter ayizukukunika naliphi na ityala kwaye ayizukuphakamisa kuluhlu lokulinda olukhutshelweyo.
Ukuphakama kweekhredithi zakho, kokunyuka kokunyuka kuya kuba kuluhlu lokukhuphela kwikhompyuter ekunike ezo iikhredithi.
BEwe, ukugcina oku engqondweni ungacinga, "ukuba ndifumana indawo apho iMule igcina khona iikhredithi zam, ndingaziguqula ndinyuse umgca wokukhuphela ngokukhawuleza." Oku kuncitshiswa kuqiqiwe, ingxaki kukuba i-eMule icinge into enye phambi kwam nawe kwaye saqonda ingxaki enokuthi izise oku.
EKe wenza ntoni uMule ukunqanda ukuguqulwa ngokuthe ngqo kwamakhredithi? Abaphuhlisi be-eMule bakwenzile ukuba ungatshintsha iikhredithi zakho ngokuzigcina kwiikhompyuter ezikhuphele into kwikhompyuter yakho.
BEwe masibone, ukuba ikhompyuter (B) ikhuphela into evela kweyakho (A), ikhompyuter B ikunika ezinye iikhredithi ukuba ngenye imini ufuna ukukhuphela into kwikhompyuter yabo.
PKodwa le khompyuter B igcina loo makhredithi kwi-hard drive yayo kwaye ibeke isazisi (A) kuyo ukuze kuphela ikhompyuter yakho ibe nakho ukusebenzisa la makhredithi ngosuku ofuna ukukhuphela into kwikhompyuter B. Kungenxa yoko ukuba xa ngalo naliphi na ixesha ukhuphela into kwikhompyuter B oku kukunika iikhredithi kwaye kukunyuse kulayini.
Aixesha njengoko ukhuphela iifayile kwiikhompyuter B kukuwe ukuba unike ezinye iikhredithi kwimeko apho ikhompyuter B ifuna ukukhuphela into kwiyakho kwesinye isihlandlo.
CNjengoko ungaze ube nokufikelela kwiikhredithi ozinikwa zezinye iikhompyuter. Ke kutheni kubaluleke kangaka ukwazi apho iMule igcina khona iikhredithi zam ukuba andikwazi ukufikelela kuzo? Impendulo ilula kakhulu kodwa kuqala masikhumbule izigqibo esizifumana esiphelweni senxalenye yokuqala yale posi:
Okokuqala: Ukuba awabelani, awufumani iikhredithi. Isisombululo kukuba sabelane ngakumbi kwaye isonjululwe ingxaki.
Sibini: Ukuba ndiyifomatha ikhompyuter yam, iMule ayindigcini naliphi na ityala. Kusengqiqweni, uyakhumbula ukuba ikhompyuter ekunike iikhredithi ubeke iilebheli yokukuqonda xa ufuna ukubanga? Ukuba ufomatha ikhompyuter, isazisi sakho siyatshintsha kwaye ke ikhompyuter eneekhredithi zakho ayisokuze ikwamkele njengomnini wayo.
Aixesha ndinokuphendula umbuzo odlulileyo. Ukubaluleka kokwazi ukuba i-eMule igcina iikhredithi zakho kwiikhompyuter zabanye abantu kukuba oku kuthetha ukuba abanye kufuneka bakuthathe njengomnini weekhredithi. Ke kuya kufuneka uhlale usichonga ukuba ungaze ulahlekelwe zizo iikhredithi.
CNjengoko sele sisazi apho i-eMule igcina khona iikhredithi zakho kwaye kufuneka ugcine isikhombisi sakho, masibone ukuba sisiphi isisombululo esinokukuphepha ukulahlekelwa sisazisi sakho emva kwefomathi.
1) Phambi kokufomatha yiya kwi "isakhelo" sefolda ukuya qwalasela i-emule. Ukwenza oku, landela indlela:
"C: Iifayile zeNkqubo eMuleconfig"
Nje ukuba ukhuphele iifayile ukhetho.dat, cryptkey.dat y abaxhasi.met.
2) Gcina iifayile kwi-CD, kwiqhosha le-USB, okanye kwenye indawo apho ungazibuyisela khona.
3) Ngoku ukuba ufomatha ikhompyuter yakho kwaye ubuyisela i-eMule kuya kufuneka uncamathisele kuphela iifayili ezintathu ezikhutshelweyo kwifolda "emiselweyo" yenkqubo kwaye isazisi sakho siza kuhlala singatshintshanga, sigcina iikhredithi ogcinelwa zona abanye.
BKulungile, yifayile "Abaxhasi.met" Awudingi ukuyigcina kodwa ukuba uyayenza ikhompyuter yakho iya kugcina iikhredithi ozinike ezinye iikhompyuter. Oku kubalulekile kuba ngale ndlela baya kuphakama ngaphambili emgceni wakho wokukhuphela kwaye oku kuya kubathanda ukuba bakunike iikhredithi ezingakumbi, uyazi njengelungu elimhlophe eliluma umsila.
POkokugqibela, enye into, mhlawumbi ucinga ukuba ukuba umhlobo wakho wabelana kakhulu, kuya kufuneka ukuba abe neekhredithi ezininzi kwaye ngokukopa iifayile zakhe ezintathu kwaye uzigcine kwifolda ye- "config" ye-eMule yakho uya kuthi ufumane ezo iikhredithi. Sukwenza, iinguqulelo zamva nje ze-eMule ziyayiqonda loo nto kwaye ziya kususa onke amakhredithi kuni nobabini.
Hndizokubona ngokukhawuleza. Imibuliso yesidiliya.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Uphi i-eMule egcina iikhredithi? (Inxalenye yesi-2)
ok oku kuzokusebenzela abaninzi abafana nam ke kwaye kutshanje kufomathiwe kwaye i-mule icotha kakhulu
Xa uhlaziya i-emule version, ngaba nazo zilahlekile?
Hola Alejandro Gcina ukhumbula ukuba zininzi iinguqulelo ze-eMule kwaye andinakuqinisekisa ukuba iifayile zetyala azizukulahleka. Ukuhlala uzolile, yenza ikopi yeefayile ezichaphazelekayo kwaye emva kohlaziyo uzibeke endaweni yazo, kuya kuthatha umzuzu nje kwaye uya kusindisa iingxaki ezininzi. Ukubulisa.
Molo umbulali weviniga, ukubona ukuba kukho ithamsanqa, ndizama ukufumana isakhelo sefolda kwi-windows vista, ngaphandle kwempumelelo, kubonakala ngathi kwifolda yenkqubo, ayihambi, njengoko kuya kuba yinto eqhelekileyo xp.
Ngaba ukhona umntu onombono apho iifestile vista zinokuyibeka khona? Kuba i-emule iyasebenza, ke kufuneka ibekhona nangona ifihliwe.
Uphando kunye noncedo lombono alunikanga ziphumo.
Isakhelo sefolda ye-Emule ayinakuvulwa: Ayinakufikeleleka. Ndizamile ukwabelana kwaye yabelana ngayo kodwa ayizukuvula. Kwenzekani?. Ndiyathemba ukuba umntu othile uza kundinika isisombululo
@david waseVista andinalwazi ke andinakukunceda.
@Juanca xa kusenzeka into efana nale uyithethayo, ihlala ivakala ngathi yintsholongwane. Dlulisa i-antivirus kwaye ufake i-firewall.
Molo VINEGRE Ndiyathemba ukuba NIPHILA KAKUHLE, NIYAZI INGXAKI ENGINAYO YINOMBOMO WENGQONDO NGOKUPHANTSI XA UMAMELELE KWIINGOMA EZISIQHINGA NGOKUQHELEKILEYO NIKA UKUTSHAYA UMQONDO.
Ndiyathemba ukuba UNGANDINCEDA ………. IMIBUZO NOMBULELO !!!!!
I-ADRIAN mhlawumbi kungenxa yokuba kukho iifayile ezingaphelelanga, oko kukuthi, lowo wabelana ngale fayile akaphelelanga
Igalelo elihle kakhulu, iluncedo olukhulu kum.
Enkosi kakhulu ngengcaciso; Kudala ndisebenzisa kwaye ndibelana nge-emule ngaphezulu kweminyaka emi-5 kwaye yenza ukuba iinwele zam zime esiphelweni ndicinga nje ukuba ndiza kulahla iikhredithi zam kwifomathi ...